PSJTV | गाडी नचलाए रुट नै खारेज हुने
गाडी नचलाए रुट नै खारेज हुने
शुक्रबार, २१ बैशाख २०७५ पिएसजे न्युज
यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडतालको घोषणा गरेका यातायात समितिको कार्यक्रम असफल बनाउन सरकार पनि तयारीमा छ । हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ । यसबाहेक, यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीका ६१९ गाडी गुडाउने तयारी छ । देशभर ५० प्रतिशत सवारी गुड्ने अपेक्षा गरेको विभागले सबै सवारीसाधनका लागि सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको पनि बताएको छ । सरकारले यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको विरोधमा यातायात समितिहरूले शुक्रबार मातहतका सबै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने कार्यक्रम राखेका छन् । सरकारले गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत पञ्जीकरण नगरी रुट अनुमति नपाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नहुने र नयाँ दर्ता नगरिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारी निर्णयको विरोधमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । एनजिओ (गैरसरकारी संस्था)का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएका ती समिति करको दायरामा आउनुपर्ने र आलोपालो प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट गर्न नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् । देशभर ५० प्रतिशत सवारी चल्छन् : विभाग यातायात समितिले सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिए पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने शुक्रबार देशभर ५० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्ने दाबी गरेको छ । ‘समितिहरूको नियन्त्रणमा रहेका केही दुर्गम जिल्लामा सवारीसाधन नपुग्न सक्छन्, होइन भने समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन,’ विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले भने । २२ कम्पनीका ६१९ सवारीसाधन गुडाउन तयार बिहीबार बेलुकासम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीले आफ्ना सवारीसाधन गुडाउन तयार रहेको भन्दै नाम टिपाएका छन् । ती कम्पनीका ६१९ वटा सवारीसाधन गुडाउन व्यवसायी तयार भएका हुन् । उनीहरूले सवारीसाधन र कर्मचारीको सुरक्षा हुनुपर्ने माग भने विभागसमक्ष उठाएका छन् । विभागले पनि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने जानकारी गराएको छ । व्यवसायीले नाम टिपाएका सवारीसाधनमा मिनीबस, डिलक्स बस, सुमो, हाइस, जिपलगायत छन् । ७७ जिल्ला प्रशासनमार्फत् सुरक्षा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालनलाई नियमित गर्न निर्देशन गरिसकेको विभागले जनायो । ‘गृहले सवारीसाधन र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिसकेको छ,’ महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागको आग्रहमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय (प्रहरी) बाट सवारीसाधनको लगत लिने काम पनि हुने बताइएको छ । सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट खारेज यातायात व्यवस्था विभागले सवारी सञ्चालनका लागि रुट अनुमति लिएका तर सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट अनुमति खारेज गर्ने भएको छ । ‘त्यो काम शुक्रबारदेखि नै थालिनेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । सरकारका आफ्ना सवारीसाधन नभएकाले यात्रुलाई केही कठिनाइ पर्ने सक्ने विभागको आकलन छ । रुटको अध्ययन र सवारीसाधनको निर्धारण असारसम्ममा रणनीतिक सडकको रुट अध्ययन प्रतिवेदन आउँदै छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा फिडर सडक रुटको अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि प्रत्येक रुटमा कति सवारीसाधन आवश्यक पर्ने हो, जनसंख्या कति छ लगायत विषय निश्चित हुनेछन् । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर रुट, गाडीको संख्या तय गरिनेछ । प्रतिस्पर्धामा ‘फस्र्ट कम फस्र्ट’का आधारमा निर्धारण गरिनेछ । हरेक आर्थिक वर्षमा जनसंख्यामा हुने वृद्धिअनुसार उक्त रुटमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सवारीसाधनको संख्या वृद्धि गरिनेछ । नयाँ वर्ष थालनीसँगै आवश्यक सवारीसाधन खुला प्रतिस्पर्धाबाट थप गरिनेछ । कुन ठाउँबाट कति बजे सवारीसाधन छुट्ने सरकारको नियन्त्रणमा हुनेछ । समितिका दुई मुख्य माग यातायात समितिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्तामा दुईवटा माग उठाएका छन् । पहिलो समिति खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो पञ्जीकरणमा लैजान नहुने छन् । विभागका महानिर्देशकका अनुसार उक्त वार्तामा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भने व्यवसायी सहमत भएका छन् । बन्द फिर्ता लिएर वार्तामा आऊ : सरकार वार्तामा सरकारले भने बन्द फिर्ता लिएर वार्तामा आउन यातायात समितिलाई आह्वान गरेको छ । वार्तामार्फत निकास निकाल्नुपर्ने भएकाले बन्द, हडतालमा नजान प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले सुझाएको वार्तामा सहभागी विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । ‘बन्द फिर्ता लिनेबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि केही बोलेनन्,’ उनले भने । सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउँछौँ : महासंघ देशभर गुड्ने साढे तीन लाख सार्वजनिक सवारीसाधन शुक्रबार ग्यारेजमा थन्क्याउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘सरकारले १८ चैतमा जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था निर्देशिका, २०७४ स्थगन महासंघको बटमलाइन हो,’ उनले भने । एउटै गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न पाउँछ रूपनारायण भट्टराई महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग कम्पनीका रूपमा एउटा मात्र गाडी दर्ता गर्न सकिन्छ कि न्यूनतम पाँचवटा नै चाहिने हो ? पञ्जीकरण हुन कम्पनी दर्तामार्फत मात्र होइन, प्रोपाइटरी फर्ममा पनि जान पाइने ऐनमा व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता नहुने (न्यूनतम ५ भन्दा कम संख्या) सवारीलाई सोल ट्रेडिङ ऐन २०१४ र पार्टनरसिप ऐन २०२० अन्तर्गत एउटा मात्र गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न पाउँछ । तर, कम्पनीमै दर्ता हुने हो भनेचाहिँ पाँचवटा सवारीसाधन हुनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रोपाइटरी फर्म दर्ता नगर्दो रहेछ । साना तथा घरेलु उद्योगमा फर्म दर्ता हुँदो रहेछ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले मान्यता नदिने रहेछ । यसले त एक–दुईवटा मात्र सवारीसाधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्न चाहनेलाई आहत भएन ? यातायात व्यवस्था विभागले कानुनअनुसार फर्म दर्ता भएर आएकालाई मान्यता दिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए मात्र मान्यता दिने भन्ने विषय गलत हो । फर्म जुन निकायले दर्ता गर्ने हो, त्यो निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर आउनेलाई विभागले मान्यता दिन्छ र पञ्जीकरण गरी रुट दिएर पठाउँछौँ । यसकारण ५ भन्दा कम सवारीसाधन भएकालाई पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन । सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा सरकारले क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम (३ लाख रुपैयाँसम्म) बिमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेकको क्षतिपूर्ति समितिहरूले व्यहोदै आएका थिए । अब सरकारको व्यवस्थापनमा उपचार र क्षतिपूर्ति कसले कसरी व्यहोर्छ ? कल्याणकारी कार्य गर्ने भनेर समितिहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने र खर्च गर्ने गरिरहेका थिए । समितिलाई यसो गर्ने अधिकार नै थिएन । यो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत बिमा समितिसँग छलफल गरिरहेका छौँ । बिमा समिति सकारात्मक छ । बिमा रकमलाई सीमित नगरेर असीमित बनाउनेतर्फ क्रमैसँग अघि बढ्ने गन्तव्यबारे छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे तत्कालै केही न केही उपाय निकालिनेछ । असीमित बिमा कार्यान्वयन तयारी गर्न नै वर्षदिन लाग्ने बिमा समितिले जानकारी गराएको छ । धेरै (उदाहरणका लागि २ सय वटा) गाडी भएको एउटै कम्पनी वा कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट गरे भने त्यसको नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? त्यो हुने कुनै सम्भावना नै छैन । कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै उसको प्रबन्धपत्र हुन्छ । नियमावलीभित्र बस्नुपर्छ र सरकारको कानुनी दायरामा हुन्छन् । अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएकाले जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न सकेन । दादागिरी देखाए । तर, कम्पनी हुनुबित्तिकै कुनै पनि कम्पनीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । अर्कोपटकमा खारेज गरिनेछ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
राजावादीद्वारा राष्ट्रपतिलाई कालो झण्डा !